Weerar Ismiidaamin ah oo Maanta Laga Qaaday Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay weerar ismiidaamin ah, iyadoo uu weerarkani uu fuliyay nin naftii hallige ahaa oo la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
Ninkan isi soo miidaamiyay ayaa inta u dhaxeyso Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Ex Kulliyaddii Jaalle Siyaad ku weeraray kolonyo uu la socday Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Axmed Maxamed Jimcaale (General Cirfiid).
Taliyaha ayaa waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday, balse gaari caasi ahaa oo qaraxa kula kulmay wadada, ayaa waxaa la soo sheegaya in uu ku burburay qaraxaasi.
Gaarigan oo xilligaasi ka yimid dhinaca wadada ka timaada Ex Control Afgooye ayaa la sheegayaa in uu waday rakaab, Inta badan dadkii gaariga saarnaa ayaa qaraxaasi ku waxyeeloobey.
Askar la socotay gaadiid Cabdi Bille ah oo lagu galbinaayay Taliyaha Ciidanka Xoogga ayaa waxaa iyagana soo gaaray dhaawacyo kala duwan.
Goobjooge, ayaa sheegay in Taliyaha Ciidanka Xoogga uu saarnaa gaari nooca aanay rasaasta karin, waxaana la beegsaday, xilli uu ka soo laabtay munaasabad lagu qabtay Xarunta Gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho.